Zvakavanzika Zvekugadzira: Tekinoroji Haigari Yehunyanzvi | Martech Zone
Chishanu, April 16, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Robby Kuurayiwa
Ndinofanira kubvuma, mavara mana TECH anondipa kudedera. Izwi rekuti "tekinoroji" rinenge riri izwi rinotyisa. Pese patinozvinzwa, tinofanirwa kunge tichitya, kufadzwa kana kufara. Kazhinji hati tarise pachinangwa chehunyanzvi kubvisa zvinetswa munzira kuti tigowana kuita zvakawanda uye tifare.
Ingori Ruzivo Technology
Kunyangwe zvazvo izwi technology inobva mushoko rechiGiriki téchnē, zvichireva “hunyanzvi,” mazuva ano tinenge tichigara tichitaura nezvazvo ruzivo ruzivo. Vaverengi veThe Martech Zone vakanyura mune zvakawanda eccentricities zveiyi ndima. Isu tinokanda zvakakomberedza mazita se URL, SEO, VoIP uye PPC. Isu tinoita kuenzanisa kwakawanda pakati pezvigadzirwa zvakasiyana, masevhisi nemaindasitiri zvinoita kunge zvisina hukama. Nyika yetekinoroji izere neakanyanya jargon zvekuti hazvigoneke kuti unzwisise zviri kutaurwa nevanhu mumisangano. Kutaura kuti uri mu "tekinoroji" kunogona kutyisidzira vamwe vanhu kure.
Pakati PeTekinoroji nehunyanzvi
Pane nyika yemusiyano pakati petekinoroji nehunyanzvi. Tekinoroji iko kushandiswa kunoshanda kwemifungo yesainzi yekuita kuburitsa mhedzisiro inobatsira kana inonakidza. Hunyanzvi hwakawanda ruzivo rwunoita kuti tekinoroji ishande. Kujekesa: Zvakakosha izvo mumwe munhu anoziva kuongorora matambudziko einjini mumota yako, asi kuti unakirwe nehunyanzvi hwemotokari haufanire kuve makanika.
Saka chii chinoitika? Heino dzidziso yangu:
Pakutanga, hapana mumwe wedu ane zano rekuti chii chichaonekwa chinotevera. Uyezve rimwe zuva, BAM, iwe unonzwa kuti Google, Chikafu Network uye International Olimpiki Komiti vari kubatana kuti vagadzire pasocial network yekukwikwidza arugula kurima.
Hazvishamise kuti hatitenge zvinhu muzvinhu ipapo ipapo. Chaizvoizvo? Zvandichaita nemuchina usina keyboard. Tinozvibvunza pachedu, sei ndichida muchina unoshandisa mutauro wemuviri kutumira mameseji pachinzvimbo changu?
Iyi mibvunzo, zvisinei, inoda zvishoma zvekunzwisisa kwehunyanzvi. Isu tinofanirwa kuzviona isu pachedu tichishandisa tekinoroji nyowani, uye tiine imwe pfungwa yekuti ingashande sei muhupenyu hwedu.
Kuwana kana Kutya
Sezvo tekinoroji ichiwedzera kuwanda, tinosangana neforogo mumugwagwa. Chero patinogona zvitore mukupenya kwekutsvaga (Ah! Ini ndinogona kuenderana neshamwari dzekare paFacebook. Kutonhora!) kana haina kumbobaya chaizvo mupfungwa dzedu. Iyo tekinoroji inotanga kutipfuura, uye isu tinotya kuti isu "hatina kungwara zvakakwana" kune nyika yakatikomberedza.
(Hazvifananidzi: tech tinowana asi hatine basa nazvo. Semuenzaniso, maapplication e iPhone anoita ruzha runonyadzisa.)
Tora kune Nyanzvi
Dzimwe nguva isu tinonzwisisa ruzivo rwehunyanzvi hwehunyanzvi hutsva, uye tinoda kuzvipatsanura nekuratidza kugona kwedu. Sezvo ini ndinonyora iyi posvo yeiyo The Martech Zone, Ndinosvika pakudaro mbichana HTML ndobva ndawedzera angu markup tag. Hunyanzvi hwekutsetsenura ndi mafaro, nekuti ini ndine hunyanzvi hwekuita kudaro.
Dzimwe nguva isu tinokwana zvakakwana kugona mune tekinoroji, tichingonzwisisa zvakakwana kuti tizive maitiro. Unogona kusanyatsonzwisisa sei yekubata skrini inoshanda, asi uine zvishoma tsika uye nyaradzo iwe unogona kufambidzana nekuishandisa zvakanaka.
Dzimwe nguva tekinoroji inoita kunge yakaoma kunzwisisa uye inotipfuura. Uku ndiko kunetsa kupfuura kwese zvinzvimbo, nekuti zvakaoma kubatsira mumwe munhu kuziva kuti dai vakangonzwisisa zvishoma zvishoma zvehunyanzvi (senge mutsauko uripo pakati pebhokisi rekutsvaga nebhawa rekero), vangave vari nani.
Ziva kuti munhu wese waunosangana naye ari kune imwe nzvimbo pamwe neTechnology Cognition Chart yechero ipi nyowani gizmo, system kana gadget.
Vabatsire kufamba munzira yavanoda kufamba (kune kugona kana hunyanzvi), kwete iyo yaunoda.
Dhizaini tekinoroji uye kushambadzira mishandirapamwe ine yega basa mupfungwa. Sika vanhu kwavari, kwete kwaunofunga kuti vanofanirwa kunge vari!
Unofungei? Varikuti vanhu vari kurarama nzira dzinoratidzwa pane iyo Technology Cognition Chart?
Tags: toredzerahwemafarocompetencekukundakuwanikidzanyanzvikutyakusazivakwezvinhukunyunyutamichinatekinoroji kugona